Igwe ọkụ n'ime ụlọ - arịa ụlọ dị n'ịntanetị maka ụlọ - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ
Home / shop / Ọkụ
Ngosipụta 1-50 nke nsonaazụ 426
Ụbọchị abata (50)
Lumetto - Nkpokoro ọkụ nke oge a - dakọtara na bọmbụ klas; A, A +, A ++ - nke a na-atụ aro maka iji ọkụ bọlbụ ụwa, filament ada ìhè (STL)
45€ Aggiungi al carrello
ngwa - mgbidi ọkụ na ọkụ 1 - ọdịdị ifuru - na ígwè na-arụ ọrụ iko - nchịkọta adịghị etinye - (STL)
Lamapada - Okpu na otu ìhè - site na nhazi ọdịdị - dakọtara na bọmbụ klas; A, A +, A ++ - na iko na metal - Ifuru n'ike mmụọ nsọ (STL)
mgbidi oriọna na-enweghị bulbs cm. 30 x 12 x 17h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Lampshade - Mbadamba oriọna na-enweghị ntutu cm. 12 x 12 x 25h - bulbs not included - colored leather - kwekọrọ na bọmbụ klas nke ụlọ; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Lampshade - Mbadamba oriọna na-enweghị ntutu cm. 12 x 12 x 25h - bulbs not included - metal color - dakọtara na bọmbụ klas; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Okpokoro na-enweghị nkwụ cm. 20 x 20 x 40h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
kichin chandelier - agba ọcha - cm. 30 x 20 x 120h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Otu oriọna ọkụ - ụdị ọdịdị - Na-ejikọta bọlbụ klas; A, A +, A ++ - ihe: osisi, nkume na ákwà (cm. 30 x 25 x 46h) (STL)
nku ala - oriọna ọkụ - ìhè okike - dakọtara na bọmbụ klas; A, A +, A ++ - ihe: osisi, nkume na ákwà - nke eke sitere n'ike mmụọ nsọ - akụkụ: cm. 45 x 23 x 170h (STL)
Igodo oriọna na eriri USB - (UL)
ngwa - mgbidi ọkụ na ọkụ 3 - ọdịdị ifuru - na ígwè na-arụ ọrụ iko - nchịkọta adịghị etinye - (STL)
Mgbidi ọkụ maka ọkụ ọkụ bulbs - (DFL)
Na-etinye aka na kristal - bulbs adịghị gụnyere - dakọtara na klas ìhè bọlbụ; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
128€ Aggiungi al carrello
Okpokoro na-enweghị nkwụ cm. 30 x 30 x 53h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Wall oriọna na-enweghị bulbs cm. 30 x 15 x 20h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Ejiri ya na akwụkwọ epupụta - cm L30 x 35h - (DFL)
Ejiri eji ọla kọpa mee ihe - akụkụ cm. 30 x 35h - (DFL)
Ejiri eji agba acha - cm. L15 x 25h - (DFL)
Chandelier - Ụlọ Mgbazi nke Oge a - Ime ụlọ Chandelier Kwesịrị Ekwesị maka ụlọ ntinye - Bulbs Not Included - Compatible with Class A, A +, A ++ (STL) Bulbs
Mbadamba ụda - Akụkụ: cm L 20 H 33 - (DFL)
Ìhè kwadoro ya na epupụta - cm. 29 x 30h - (DFL)
Okpokoro mma na ọla kọpa epupụta - cm. L45 x 70h - (DFL)
A na-eji ejiji acha - cm. L 23 x H 31 - (DFL)
White mgbidi oriọna - Jikọtara na klas bọlbụ; A, A +, A ++ - (UL)
Black table lamp - Kwadoro na klas bọl; A, A +, A ++ - (UL)